कसरी ग्यालिलियो थर्मामिटरहरू (I विचार) - डेकुराको साथ तपाईंको घर सजाउने सजाउनुहोस्
ग्यालिलियो थर्मामिटरहरूको साथ कसरी तपाईंको घर सजाउने
सुसाना Godoy | | सजावट, वस्तुहरू
के तपाईंलाई थाहा छ? ग्यालिलियो थर्मामिटरहरू? तिनीहरू सत्रौं शताब्दीको आविष्कार भन्दा धेरै छन्। यो हाम्रो दिनहरुमा आधारभूत टुक्राहरू मध्ये एक भएको छ र अब, हामीलाई तापक्रम दिने कार्यको साथसाथै, योसँग अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि छ। यो हाम्रो घर सजावटको बारेमा हो र यसलाई धेरै छुने शैली प्रदान गरीन्छ जुन हामी धेरै खोज्दैछौं।
किनकी हामी हेर्नेछौं, त्यहाँ केही टुक्राहरू छन् जुन शताब्दीहरू ती पार गरे कि फरक पर्दैन। किनकी यसको महत्त्व पहिलो दिनको रूपमा बरखास्त हुनेछ। त्यसकारण, हामी यसलाई हराउन चाहँदैनौं र हामी यसलाई हाम्रो घरको कोठामा समाहित गर्नेछौं। तपाइँ कसरी जान्न चाहानुहुन्छ थर्मामीटरमा सजावट ग्यालिलियोको?
1 सजिलो सजावटको लागि ग्यालिलियो क्षेत्र थर्मामीटरहरू
2 मूल टुक्राको साथ तखताहरू सजाउनुहोस्
3 क्लासिक हललाई यसको गलीलियो थर्मामीटर र घडी चाहिन्छ
4 तपाईंको कार्यक्षेत्रमा विवरणहरूको ख्याल राख्नुहोस्
5 थर्मामिटरहरू बगैचा र टेरेसहरू सजाउन पनि
सजिलो सजावटको लागि ग्यालिलियो क्षेत्र थर्मामीटरहरू
जब हामी काठको साथ काँचमा सम्मिलित हुन्छौं हामी शैलीलाई हाम्रो घरमा आउँदैछ भन्ने हामीलाई पहिल्यै विचार हुन्छ। त्यसकारण, यस अवस्थामा, प्रश्नमा रहेको थर्मामिटरको गोलाकार आकार छ। एक मूल विचार जुन प्राकृतिक रंगमा काठको आधारले पूरा हुन्छ। तसर्थ, यसलाई बाहिर देखिनका लागि, यसलाई सजिलै फर्नीचरको टुक्रामा राख्नु उत्तम हुन्छ, जहाँ अत्यधिक सजावट र मिनिमलिज्म हाम्रो ढोका ढकढक्याउँदैन। कसरी बारेमा बैठक कोठा फर्नीचर सजावट थर्मामीटरको साथ?
यो अझ एक टुक्रा जस्तो देखिनेछ, तर हामी सबैलाई थाहा छ यो छैन। किनकि यो काँचका सामानहरू मिलेर बनेको छ जुन तरलमा डुबेको छ र हामीलाई सबै समयमा तापक्रम दिनेछ। तर त्यो बाहेक, सबैको शैली व्यावहारिक र सजावटी विचार त्यो तपाईंको घरमा हराउन सक्दैन। यसको वरिपरिको प्राकृतिक प्रकाश, सेतो वा पेस्टल रंगहरू र फर्निचरसहित फर्निचर प्राकृतिक पनि तपाईको उत्तम सहयोगीहरू हुनेछन्। यदि तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ भने कुन ग्यालिलियो थर्मामिटर किन्नु पर्छ? साधारण सजावटको लागि गोलाकार तपाईंको पहिलो छनौट हुनेछ।
मूल टुक्राको साथ तखताहरू सजाउनुहोस्
शेल्फ वा किताब पसलहरू प्रायः विवरणहरूले भरिन्छ जुन धेरै पटक हामी किन जान्दैनौं। तसर्थ, सफा गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई आवश्यक मौलिकता दिनुहोस्। ती अधिक हालका र आधुनिक स्थानहरूको लागि, तपाईं आफ्नो ग्यालिलियो थर्मामीटरहरू राख्न सक्नुहुनेछ तर कम पारम्परिक आकारको साथ। एउटा सिसाको बल्बको समाप्ति सहित तपाईको उत्तम जवाफ हो।
यो पुस्तकहरू जुन तपाईं सँग बिना पढेको वा ती नोटहरूमा राम्रो समीक्षाको लागि पर्खिरहेका छन् बीचमा राख्नुहोस्। यो निश्चित छ कि तपाईंलाई उत्तम तरिकाले उज्यालो बनाउने छ! अवश्य पनि, यससँग टुक्राहरू भएको, सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाइँ यसलाई अधिक सजावटी विवरण नदिई प्रख्यातता दिनुहोस् यसको वरपर यदि तपाइँ गर्नुहुन्छ भने, त्यसो भए उत्तम छ कि उस्तै रचनात्मक रेखा पछ्याउनुहोस् ताकि तिनीहरू संघर्ष नहोस्। उही र color आधारमा र सबै भन्दा माथि, गिलास वा धातु समाप्तमा छुनुहोस्।
क्लासिक हललाई यसको गलीलियो थर्मामीटर र घडी चाहिन्छ
यद्यपि हामीले पहिले मौलिकता र सरलता देखेका छौं, अब यो पालोको पालो हो सजावट मा अधिक क्लासिक शैली। तर हामीले त्यसलाई उम्कन दिनु हुँदैन किनकि यसले हाम्रो वातावरणमा सँधै भव्यता थप गर्दछ। यस अवस्थामा, हामी एक पूर्ण टुक्राहरूको सामना गरिरहेका छौं, त्यसकारण यसले घरको प्रवेश द्वारको अध्यक्ष हुन सक्छ र यसैले यसलाई सबै प्रतिष्ठा दिनुहोस्।
एक मौसम स्टेशन जसमा थर्मामीटर छ, जैसा कि हामीले उल्लेख गर्यौं, एक घडीको अतिरिक्त, ब्यारोमिटर र हाइग्रोमिटर। यी सबै एक सुन्दर गाढा र धेरै चमकदार काठ समाप्त संग। हो, क्लासिक शैली एक हुनेछ तपाईंको स्वागत छ तपाईंको घरमा, यद्यपि तपाईं आफ्नो छनौट गर्न चाहानुहुन्छ भने, थर्मामिटरको यो वेब तपाईलाई चाहिएको सबै छ।
तपाईंको कार्यक्षेत्रमा विवरणहरूको ख्याल राख्नुहोस्
को कार्यालय वा कार्यस्थलहरू सामान्य रूपमा उनीहरूसँग राम्रो अर्डर हुनु आवश्यक छ र त्यस्तै राम्रो सजावट पनि हुनुपर्दछ। यदि तपाईंसँग पहिले नै तपाईंको स्पेस छ भने, यो पक्कै सबैभन्दा आवश्यकमा सजिएको हुनेछ। कि हैन? किनभने कहिलेकाँही हामी थप शैलीको साथ टच थप्न चाहान्छौं र हामी कसरी जान्दैनौं। महान आवश्यकहरू, उपकरणहरू र राम्रो प्रकाशको थपमा, हामीसँग केहि बढि ठाउँ छ।
हामी त्यो सम्झना गर्छौं यी ठाउँहरूलाई भीडभाड गर्नुहुन्न। यदि होईन भने हाम्रो एकाग्रता हरेक क्षणमा जान्छ। तर पक्कै पनि तपाइँसँग सानो बिरूवाले सजावट गर्न प्वाल छ र त्यसको छेउमा ग्यालिलियोको थर्मामिटरहरू मध्ये एक, जुन यस अवस्थामा ड्रप जस्तो आकारको हुन्छ। हो, हामी मौलिकता र अद्वितीय टुक्रामा फर्कन्छौं जुन रंगको ती टचको साथ भव्यता ल्याउँदछ। सधैं याद गर्नुहोस् कि कार्यस्थलको लागि सेतो लालित्य दर्साउँदछ, तर पहेंलो स्ट्रोक सँधै उपस्थित हुनुपर्दछ किनभने तिनीहरू सृजनात्मकता हुन्। हामीलाई चाहिने सबै चीजहरू दिन हामी अझ बढी माग्न सक्दैनौं। जहिले पनि थर्मामीटरको बारेमा सोच्नुहोस् तपाइँको काम तालिका सजाउनुहोस्!
थर्मामिटरहरू बगैचा र टेरेसहरू सजाउन पनि
हामी जहिले पनि हाम्रो घरको भित्री भागको बारेमा कुरा गर्छौं, जहाँ बैठक कोठा, भोजन कक्ष वा अन्य कोठाहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ। हामी यसलाई अस्वीकार गर्ने छैनौं, हामी बाह्य व्यक्तिहरूलाई पनि बिर्सदैनौं। यदि तपाईंसँग एउटा भाग्यशाली छ भने बगैंचा क्षेत्र, छत वा ठूलो बालकनी, तपाईं पनि एक राम्रो मूल सजावट गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी?
ठीक छ, बनाउँदै प्राकृतिक तत्वहरूको संयोजन। यी स्थानहरूमा बोटबिरुवाहरू जस्तै मौलिक टुक्राहरू छन्। सजाउने क्षेत्रमा निर्भर गर्दै, तपाइँ समर्थनहरू सहित केहि ह्या hanging्गिंग वा स्थायी भाँडाहरू छान्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, तपाईंले आधारभूत ग्यालिलियन थर्मामिटर मध्ये एकको साथ भाँडो वैकल्पिक गर्न सक्नुहुन्छ। आधारभूतको रूपमा हामी उनीहरूको विस्तारित आकारहरूमा अधिक देखिन्छ देख्दछौं। यसबाट, तपाईं यी थर्मामिटरहरूमा भएका साना टुक्राहरूको सन्दर्भमा र colorको टच पनि थप्न सक्नुहुनेछ। रातो, नीलो वा हरियो तपाइँको बगैचाहरु को एक विशेष फिनिश दिन्छ। तपाईं कुन सुरू गर्न जाँदै हुनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » ग्यालिलियो थर्मामिटरहरूको साथ कसरी तपाईंको घर सजाउने
परिवार फोटोको साथ सजावट गर्न विचारहरू
Ikea शिफोनिअर्स कुनै पनि कुनामा अनुकूल छ